Ronin: Samurai ugu dambeeya waa ciyaar sax ah oo lagula dagaallamo katanas | Androidsis
Ku cabiro dhaqdhaqaaqyadaada iyo garaacista saxda ah ee katana-gaaga weyn ee Ronin: Samurai ugu dambeeya
Ronin: Samurai ugu dambeeya wuxuu ku imaanayaa Android iyo in ay soo uruurisay tobanaan kun oo dib u eegis ah oo u sacbinaya isla markaana ansixinaya shaqada weyn ee ay fulisay Dreamotion si loogu soo bandhigo kulankaan Google Play Store.
Cinwaan cusub oo loogu talagalay Android oo aan dib ugu soo celi xusuus wanaagsan ciyaar kale oo weyn oo samuraay ah como es Da'da ammaanta Samurais. Gaar ahaan fulinteeda weyn ee animations-ka iyo sida aan u xakameyneyno ku-meel-gaadhka dagaalka si aan u ogaano sida loo doorto goorta lagu garaaco kuwa garaaca saxda ah leh katana. U tag.
1 Ciyaar cagaha ka labbisan
2 Iska ilaali madaxdii ugu dambeysay ee Ronin: Samurai Dambe
3 Khibrad samurai ah oo dhan
Ciyaar cagaha ka labbisan
Un Sir dagaal game la katanas oo aan ku qabanno samurai ah taas oo la kulmeysa kooxo badan oo cadaw ah si ay u horumariyaan una bartaan xirfado wanaagsan.
Dagaaladaas waa inaan ku dhaqaaqnaa si taxaddar leh uga taxaddar tallaabooyinkayaga oo aan dooranno daqiiqadda saxda ah si aan waxqabadkeena ugu qabano hal mar katana. Taasi waxay tiri, waxaa muhiim ah inaan sidoo kale eegno goorta aan iska difaaci karno weerarada cadowga, iyo goorma la mid ah Demon Blade, makaanikada ciyaarta badanaa waxay ku saleysan yihiin xaqiiqadan.
Waxaa laga yaabaa in mid ka mid ah sifooyinka qeexan ee Ronin: Samurai ugu Dambeeyay, ay tahay xaqiiqda waa inaan aad uga feejignaano cadawga wax tooganaya meel fog ka fog si aan ugu soo dhowaanno iyaga inta ay qoryahooda ku rarayaan.
Iska ilaali madaxdii ugu dambeysay ee Ronin: Samurai Dambe
Sida madaxda ugu dambeysa, dhammaantood si aad u wanaagsan ayaa loo qaabeeyey iyo bilicsanaanta muuqaalka ah ee cabsida, waxay awoodi doonaan inay adeegsadaan awoodo gaar ah oo ay nagu adkaan doonto inaan ka fogaanno iyaga oo aan waxyeello noogu geysan baarka nolosha. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira qaabab aan uga hor tagi karno weerar lama filaan ah oo ka dhigaya wax aan faa'iido lahayn.
Anaga oo u daneyneyna waxaan heysanaa baar manaan ah ama tamar ah oo dib loo buuxiyo iyo inaan u adeegsan karno inaan ku horumarino weerarro gaar ah oo cadawga ugu dhowaa inuu qaboojiyo cabsida aan siin doonno. Farsamooyinkaan oo dhan waxaa lagu bari doonaa casharka yar ee aan ku yeelan doonno bilowga taasna waxay inagu soo dhoweynaysaa khibrad dagaal oo dhan oo leh katanas.
Ka dib, laga bilaabo menu-ka weyn waxaan awoodi doonnaa inaan hagaajino qalabka of our samurai iyo furo sanduuqyada leh xirfado aan u isticmaali karno bilowga ciyaarta. Mana aha wax fudud Ronin: Samurai ugu dambeeya oo leh dhib kor u kaca si deg deg ah.
Khibrad samurai ah oo dhan
Oo sidaas ayay ku jirtaa ciyaar ka badan wareega wareega oo loo turjumay Spanish Dabcan, waa freemium sanduuqyadaas in la furo. Haa waa run in Ronin: Samurai-kii ugu Dambeeyay uu dhibaatooyin aad u daran bilowgii ku yeeshay xirnaansho aan munaasib ahayn oo loo qabtay mobilada qaar, laakiin waxay umuuqataa inay horeyba u xalisay iyadoo ay ugu wacan tahay casriyadii ugu dambeysay ee maalmahan.
Muuqaal ahaan waa ciyaar ku socota midabadaas sida haddii la geliyey oo ay ku faani karto animations aad u fiican kuwaas oo bixiya khibrad dagaal oo wanaagsan. Aynu ku darno jawiga lagu abuuray jawiyadaas iyo suugaantaas oo ay kujiraan madaxdii ugu dambeysay oo ay weheliso halyeeygeena, waxaanan leenahay ciyaar culus oo aan bilaabi doonno sannadkan; Waa run in la bilaabay 2020, laakiin waxay ku jirtaa qaybahan.
Ronin: Samurai-kii ugu dambeeyay waa ciyaar deeqsi ah oo cajiib ah ciyaarta dagaalka samurai moobaylkaaga Android ee ay tahay inaad hadda rakibto si aad si buuxda ugu raaxaysato. Waxaan kugula talineynaa mid ka mid ah kulamada ugu wanaagsan bishaan waxayna noqon doontaa ciyaarta ugu fiican ee Androidsis ee Janaayo 2021.
Haddii aad rabto inaad khibrad uhesho dagaalka udhaxeeya samurai shaqsiyan oo aad sifiican uxulmato goortaad kudhibaataysid garaacaaga, waxaad horeyba usbuuc usocotay ciyaar.
Muuqaal weyn oo muuqaal ah
Muddada dagaalka ee la xakameynayo goorta la weerarayo iyo la difaacayo
Dhibaatada si dhakhso leh u kordheysa
Naqshadaynta madaxdii ugu dambaysay iyo jawiga la abuuray
Animations-ku sifiican ayaa loo fuliyay
Waxaa laga yaabaa inay aad u adag tahay marka hore waxaadna u baahan tahay inaad jiido sanduuqyada
Ronin: Samurai ugu dambeeyay
Developer: Riyada Inc.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Ku cabiro dhaqdhaqaaqyadaada iyo garaacista saxda ah ee katana-gaaga weyn ee Ronin: Samurai ugu dambeeya
Sida loo kiciyo habka mugdiga ah ee Signal
Xiaomi way iska difaacday Mareykanka waxayna beenisay inay tahay "shirkad millatari Shiinaha shuuciya"